မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ စာကြည့်တိုက်: မောင်းတောမြို့ က အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုရဲ့  နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
မနေ့က ဇွန် ၊၀၈၊ ၂၀၁၂ နေ့ပိုင်းတွင် မောင်းတောမြို့ နေ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား ဒေါက်တာနောဂျူမော်ဒင် အသက် (၆၅ - ၇၀) လောက်ရှိသူသည် စစ်သွေးကြွ အကြမ်းသမားတို့၏ ရက်စက်စွာ ဓါးခုတ် သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း ယနေ နံနက်ပိုင်းတွင် မောင်းတောမြို့ မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ တဖန် မနေ့က
၀၈ ၊ ဇွန် ၊ ၂၀၁၂ ရက် ည ၁၀ နာရီလောက်တွင် ဂေါ်ဒုတာရား ကျေးရွာနေ ဥက္ကဌဟောင်း
နုရ်ရုရ်အာမီန် ဆိုသူကိုလည်း ၎င်း၏ ဆိုင်၌ပင် လည်ပင်ကို ဓါးဖြင့်လှီးဖြတ် သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း ၎င်းကျေးရွာသား တစ်ဦးမှစုံစမ်းသိရှိရသည်။ ၀၉ ၊ဇွန် ၊၂၀၁၂ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ၈ နာရီလောက်တွင် မောင်းတောမြို့ တောင်ပိုင်း ၅ မိုင်အကွာအဝေးတွင်ရှိ ဒုရှီရာတောင် ကျေးရွာသား လူငယ်
၂ နှစ်ဦးကို စစ်တပ်မှ ကားမောင်းသွားစဉ် ပစ်သတ်သွားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ မနေ့ ည ၌ ဖြစ်ဖျက်ခဲ့သော အကြမ်းဖက် မီးရှို့  သတ်ဖြတ်မှုတွင် ၃ မိုင် ဒုလာဖါရာရွာတွင်
ဗလီတစ်လုံး မီးရှို့ ခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
မောင်းတော မြို့ ပြင်က ၃မိုင် ၄မိုင် ကျေးရွာများရှိ ရိုဟင်ဂျာအိမ်ခြေများ နှင့် အမှတ် (၅ )ရပ်ကွက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ အိမ်ခြေများစုစုပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်
မီးရှို့ ခံခဲ့ရပြီး ရိုဟင်ဂျာ မူစလင် အယောက် (၂၀၀ ) လောက် သတ်ဖြတ်ခံရသည်ဟု ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာများကဆိုကြသည်။ ပြင်ပ မီဒီယာများတွင် သတင်းလွှင့်ရာတွင် ရိုဟင်ဂျာတွေက
မီးရှို့ နေတယ်၊သတ်နေတယ်ဟူ၍ လုပ်ကြံသတင်းများကို ဖြန့်ဝေကာ အခြားတဖက်ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတော ဒေသနေ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများကို ညတွင်းချင်း အုပ်စုလိုက် သတ်ဖြတ်မှု
များကို ရက်ရက်စက်စက် ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ အရပ်သား ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံးကို ၎င်းတို့ နေထိုင်ရာပတ်ဝန်ကျင်၌ ရှိသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် အစောင့် အကြပ်များဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ထားပြီး အိမ်တွင်းနေ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အိမ်များကို မီးရှို့ ၍
အိမ်ပြင်ထွက်လာသူများကို ရက်ရက်စက်စက် သားကောင်းများသဖွယ် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြီး
ကားပေါ်တင် သယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း မနက်မိုးလင်းတော့ လမ်းပေါ်တွင် စွန်းထင်နေသော
သွေးများကို မီးသတ်ကားများဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်သက်သေ တစ်ဦးဖြစ်သူ လက်ရှိ U.N အမူထမ်းတစ်ယောက်ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မနေ့ ညပိုင်းက ဖြစ်ဖျက်ခဲ့သော မင်းမဲ့စရိုက် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများစတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပုံများ အသေးစိပ် စုံစမ်း မေးမြန်းထားသည်များကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။
ညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ပြန်အပြီး ရိုဟင်ဂျာမူစလင်များသည် မိမိတို့၏ နေအိမ်အသီးသီးများသို့ ပြန်သွားပြီး နောက်ပိုင်း ခန့်မှန်ခြေ ည ၇း၀၀ နာရီလောက်မှစ၍မောင်းတော အကျဉ်းထောင်ဟောင်း
အနီး အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ အကျဉ်းထောင်အနီး ဘောလုံးကွင်း၌လုံထိန်း၊ ရဲ ၊န.စ.ကနှင့် စစ်သားများက နေရာယူ၍ အရပ်သား ဟန်ဆောင်ထားသူများက အမှတ်(၅) ရပ်ကွက် အတွင်းရှိ
ရိုဟင်ဂျာ မူစလင် အိမ်များကို ဓါတ်ဆီပုလင်းများဖြင့် စတင်ပစ်ပေါက် မီးရှို့ မှုကြောင်း အိမ်တွင်နေ ရိုဟင်ဂျာမူစလင်ကလေး လူကြီး အမျိုးသမီး အများအပြား မီးလောင်းသေဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်။ အိမ်မီးလောင်း နေစဉ်း အပြင်ကို ထွက်လာသူ အားလုံးကိုလည်း အိမ်ကို ဝိုင်းရံထားသော
ရခိုင်လူမျိုး လုံထိန်း၊ န.စ.က နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းအမှတ်(၅)ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ အသက်ဘေးက ထွက်ပြေး လွှတ်မြောက်ခဲ့သူမှ သိရသည်။
၎င်းသေဆုံးသူများကို နံနက်ပိုင်းတွင် ကားပေါ်တင် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
သေဆုံးသူများသည် အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်မှ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း မောင်းတော တစ်မြို့ လုံး မြို့ ပြင် အတွင်း ခန့်မှန်ခြေ စုစုပေါင်း ရိုဟင်ဂျာ မူစလင်အယောက် (၂၀၀) ထိရှိနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ ။ ရဲတပ်သား ၃၀၀၀နှင့် ရခိုင်ပြည်တွင်က အခြားမြို့ များက စစ်သား ၅၀၀၀ထောင် ကိုလည်း မောင်းတောမြို့ ပေါ်ရောက်ရှိနေကြောင်း ရခိုင်လူမျိုး န.စ.က ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် လုံထိန်းအများအပြားနဲ့ အတူ အရပ်သား ဟန်ဆောင်ထားသူ လူ ( ၂၀၀ )လောက်က ရှေ့ဆုံးကနေ အိမ်များကို ဓါတ်ဆီပုလင်းများဖြင့် ပစ်ပေါက် မီးရှို့ ခဲ့ကြောင်း မီးလောင်အိမ်အတွင်းမှ ထွက်လာသူ ရိုဟင်ဂျာ မူစလင်များကို ရခိုင်လူမျိုး လုံထိန်း၊ ရဲ နှင့် န.စ.က တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဝိုင်းဝန် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သေဆုံးသွားသော
လူသေအလောင်းများကို ကားပေါ်တင် ချက်ချင်း သယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်။
ပြည်ပ သတင်းဌာနများနှင့် ပြည်တွင်းက သတင်များတွင် ဖေါ်ပြနေသကဲ့သို့ ရိုဟင်ဂျာတွေက သတ်နေတယ် ၊ဘင်္ဂလာက ဘင်္ဂါလီတွေဝင်ရောက်လာပြီး ရခိုင်ကို သတ်နေတယ်
ဆိုတာ လုံးမဟုတ်ပါဘူး အခုကိစ္စကို ဘက်မလိုက်ဘဲ သတင်းအမှန်ကို ရယူ ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မီဒီယာများကို မောင်းတောမြို့ ခံ ရိုဟင်ဂျာများက တောင်းဆို
ပါကြောင်း သတင်းဌာနများသို့ မောင်းတောလူထု ရိုဟင်ဂျာတို့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
စစ်ရဟပ်ယာဉ် ၂ စင်းဖြင့် မောင်းတော မြို့ ပေါ်တွင် ပျံသန်း ကင်းလှည့်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဆောက်ကုလားတွေ နည်းတောင်နည်းသေတယ် အမျိုးပြုတ်အောင် လည်လီးပြစ်ရမှာ
Anonymous June 9, 2012 at 9:57 PM
hope to become as u said that many roingers are killed by myanmar soilders which are not our citizens. myanmar governmet should do like thailand on roinger. due to weakness of myanmar government roingers are shamelessly said that they are citizens.so meaningless word. none of the countries in the word wants these roinger as their citizens
Anonymous June 11, 2012 at 2:48 AM
မအေလိုးခွေးသားခွေးကုလား ခွေးသေ၀က်သေ သေ ခွေးမျိုးပြုတ်အောင် အကုန် သတ်ရမှာ။
son of bit.Our country have no Rohingya .Go to hell.